Hargaysa: Madax Dhaqameed Baaq Nabadeed U Diray Beelaha Dirirtu Ku Dhexmartay Koonfurta Sool | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Hargaysa: Madax Dhaqameed Baaq Nabadeed U Diray Beelaha Dirirtu Ku Dhexmartay Koonfurta Sool
Published on September 11, 2018 by sdwo · No Comments
Hargaysa (SDWO): Xubno ka mida madax dhaqameedka Somaliland ayaa ugu baaqay in ay dagaalka joojiyaan, isla markaana nabadda qaataan beelaha walaalaha ah ee colaadu ku dhexmartay koonfurka gobolka Sool.
Salaadiintaasi oo kala ahaa suldaan Daahir Xasan Khaliif iyo garaad Yoonis Garaad Cabdillaahi, oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaaladda Hargaysa ayaa ugu baaqay sulaadiinta, cuqaasha, garaaadada iyo waxgaradka beelaha dirirtu u dhaxayso inay isu yimaadan iskuna tanaasuulaan oo ay nabadgeliyo ku dhameeyaan arrimahoodd.
Suldaan Daahir Xasan Khaliif, oo ugu horayn hadlay ayaa ka sheekeeyay dhibaatooyinka laga dhaxlo dagaalka sokeeyaha iyo sida aanu marnaba faa’iido u helaynin dhinac ka mida dhinacyadda colaadu u dhaxayso.
Isagoo arrimahaas ka hadlayayna waxa uu yidhi “Waxaanu halkan baaq nabadeed uga diraynaa walaalahayaga dirirta iyo dagaalku ku dhexmaray Koonfurta gobolka Sool. Waxaanu leenahay marka koowaad Illaahay SWT ka baqa oo joojiya Dhiiga daadanaya. Anagoo ah salaadiinta beelweynta Madhibaan ee degan Jamhuuriyadda Somaliland.
Waxaananu walaalahayo u soo jeedinaynaa inay joojiyaan dagaalka iyo dhibka iyo aafada dhex taala. Waayo? dagaalka sidiisaba tarantiisu waxaa weeyaan inay dad ku madhaan, hooyo ku goblanto oo Wiilal lagu waayo.
Aafada kale ee ka danbeysaana waxaa weeye, dagaalku waxaa uu keenaa oo laga dhaxlaa Gaajo, Iimaan la’aan iyo dhimasho. Waayo? mar walba Illaahay waxa uu umada ugu manno sheegtay waa amni iyo iimaan.
Amni iyo iimaanku haddii ay meesha ka baxaa na waxaa soo gala iimaan la’aan Gaajo iyo Haraad. Walaalayaal joojiyaa dagaalka, dad walaalo ah oo ehel ah ayaad tihiin. Arrinka na wadahadal halagu dhameeyo”.
Geesta kale suldaan Daahir Xasan, ayaa ugu baaqay xukuumadda Somaliland iyo shacabka ba in ay ka wada qayb qaataan sidii colaadda beelaha dhex taalla loo demin lahaa.
“Xukuumadda tallada dalka haysa iyo shacabka reer Somalilland, waxaanu ugu baaqay inay ka qayb qaataan sidii colaada deegaankaasi ka taagan loo demin lahaa” ayuu yidhi suldaan Daahir.
Sidoo kale garaad Yoonis garaad Cabdillaahi, ayaa fariin u diray cuqaasha, garaadada, madax dhaqameedka iyo waxgaradka labada dhinac ee dirirtu u dhaxayso inay arrimaha nabadgeliyo ku dhameeyaan.
Waxaanu tilmaamay in nabadgelyadu ay tahay waxa keliya ee Somaliland astaanta u ah. “Ka sulaadiin ahaan anagu waxaanu diyaar u nahay in aan walaalahayo ugu baaqno inay nabadda ilaaliyaan.
Jamhuuriyadda Somaliland waxa keliya ee ay ku caanno maashay ama se astaanta u ah, waa nabadgeliyadda”ayuu yidhi garaad Yoonis.
Isagoo si gaara baaqa ugu dirayay madax dhaqameedka beelaha dagaalaya waxa uu yidhi “Dhibaatada dhexdooda taala cid kale ma xalin karto ee waa inay iyagu isu tanaasulaan.
Waxaanan si gaara ula hadlayaa cuqaasha, waxgaradka iyo garraadada labada beelood in iyagoo aanay ba cidi na dhexgelin isu tanaasulan, oo ay isu yimaadaan”.